Itoophiyaa: Himatni namoota 63 malaammaltummaafi sarbama mirgaan shakkamanii adda cite - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaa: Himatni namoota 63 malaammaltummaafi sarbama mirgaan shakkamanii adda cite
Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa faayidaa uummataafi mootummaaf jecha himatni namoota 63 akka adda citu murteessuu hime.
Namootni kunneen kanneen sababa adda addaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtiin ilaalama turedha jedhan dubbi himaan Abbaa Alangaa Federaalaa Obbo Zinaabuu Tuunuu.
Malaammaltummaa, sarbama mirga namoomaa, ajjeechaa aanga'oota mootummaa olaanoo Waxabajjii 22 akkasumas hokkarawwan Sidaamaa, Somaalee fi Beenishaangul Gumuz keessatti uumamaniin wal qabatee warra himatamaniidha kan himatni isaanii akka adda citu kan murtaa'e.
Haata'u malee, namoonni himatni isaanii adda citu warra yakka kana hogganuu keessatti gahee hin qabneefi qoodi yakka isaanii gadi aanaa ta'e qofa jedhan.
Daldalaafi abbaa qabeenyaa 'Acess real estate' kan ta'e Eermiyaas Amaalgaa, direektara itti aanaa Eejansii Nageenya Odeffannoo INSA kan ture koloneel Biiniyaam Tawaldeefi dubbi himaa paartii ABIN Kiristaan Taaddalee namoota gadi dhiifaman keessa akka jiru.
Obbo Eermiyaas hoteela Impeeriyaal gatii daran ol ka'aan METEC'f gurguruun yakka malaammaltummaan himatame ture. Obbo Biiniyaamillee akkasuma yakka malaammaltummaa olaanaan himatame.
Obbo Kiristiyaan Taaddale ajjeechaa aanga'oota olaanoo naannoo Amaaraan shakkamee ture kan hidhame.
Isaan kana malee hoggannoonni naannoo Somaalee pireezidantii naannichaa duraanii Abdii Mohaammad Umar waliin himatamanii turan lamaa fi rogeeyyii namoonni siyaasaa Sidaamaas warra gadi dhiifaman keessa jiru.
Namoonni kunneen yakka waan hin raawwanneef yookin ragaan waan irratti hin argamneef osoo hin taane himatni isaanii adda cituun uummataafi mootummaaf faayida qaba jedhamee waan amanameefi jedhan.
"Tokkummaa biyyaalessaafi jijjiirama amma adeemaa jiruuf faayidaa qabu ilaalcha keessa galchuun murtaa'e," jedhan.
Dirree siyaasaa bal'isuun galma himata namoota kanaa adda kutuu yoo ta'u himatamtoonni rakkoo fayyaa qabaniifi kanneen ijoollee xixiqqoo waliin hidhamanis dhimmi isaanii ilaalacha keessa galeera jedhan.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuufi namoota yakkaan shakkamanii to'annoo jala hin oolle seeratti dhiyeessuuf kutannoo akka qabus himaniiru.
Tarreen amoota gadhiifamanii kan ittaanu fakkaata: